Dhismaha taariikhiga ah ee El Centro de la Raza ee Seattle iyo dhismahayada xafiiska Federal Way waa u xidhan yahay dadweynaha ilaa ogeysiis dheeri ah. Shaqaaluhu waxay ka shaqaynayaan meel fog si ay u sii wadaan bixinta 43ka barnaamij eeyada iyo adeegyadayada. Bangigayada cuntada, xanaanada carruurta, qaybinta qadada sare iyo guryeynta ayaa weli furan goobta (hoos eeg). Fadlan si toos ah ula xiriir shaqaalaha si aad u hesho caawimo addoo isticmaalaya hagahayaga halkan. Taleefoonnada oo dhan lama jawaabi karo fariimahana waa la soo celin doonaa sida ugu dhakhsaha badan, laakiin filo dib u dhac sababtoo ah mugga wicitaannada nala soo diro. Waxaan ka mahadcelineynaa dulqaadkaaga iyo taageeradaada.
** The barnaamijka sare wuu xiran yahay laakiin wuxuu leeyahay qaybinta qadada bacda si xaddidan.
**Codsiyada dalxiiska, fadlan wac (206) 957-4605 ama iimayl u dir mpaguada@elcentrodelaraza.org.
**Dhammaan barnaamijyada iyo adeegyada kale, fadlan la xidhiidh shaqaalaha ku qoran our Tusaha Shaqaalaha. Shaqaaluhu waxay samaynayaan wax kasta oo suurtagal ah si ay u bixiyaan adeegyada meel fog. Tusaale ahaan, fasallada waxaa lagu bixiyaa khadka ESL, Awood-siinta Maaliyadda, Xarunta Fursadaha Ganacsiga, Unidos in Finance iyo Unidos at Work.
**Si aad u codsato macluumaadka ku saabsan kiraynta Xarunta Dhaqanka ee Centilia ama meel bannaan oo ku taal dhismaha taariikhiga ah, fadlan buuxi foomkan.
** Waayo su'aalo kaleFadlan wac (206) 957-4605 ama iimayl u dir mpaguada@elcentrodelaraza.org.
**Ku samee a ku-deeqidda, fadlan riix halkan.
**Fadlan dib u hubi wixii ku soo kordha marka xaaladeenu sii xumaanayso.mpaguada@elcentrodelaraza.org